Indlela yokongeza imvelaphi yomculo kumabali e-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 2, 2019 0 IiCententarios 1266
Umnqweno wamva nje kumajelo asekuhlaleni ngamabali. Ukusuka ku-Facebook naku-Snapchat ukuya ku-WhatsApp okanye kwi-Instagram, phantse wonke umntu unalo olu phawu. Inxalenye emnandi malunga nala mabali kukuba ahlala kuphela ixesha leeyure ezingama-24 kwaye anyamalale kungekudala emva koko. Siza kukuxelela ungawongeza njani umculo wangemva kumabali e-Instagram.
Nangona uSpapchat wayenguvulindlela wokuqala kwi zinyamalale iifoto , I-Instagram ifikelele kuyo kwaye ngokukhawuleza isungule impumelelo Amabali e-Instagram . Ngaba kumnandi ukwenza amabali kwaye uwabukele, ngaba bekungayi kuba kuhle ukuba nomculo njengebhonasi eyongezelelweyo kumabali akho e-Instagram?
Kule posi, siza kuphonononga iindlela ezimbini esinokongeza ngazo umculo kumabali e-Instagram. Eyokuqala kukusebenzisa i-Instagram kwaye enye kukusebenzisa umntu wesithathu.
Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masqale.
# 1. NGENDLELA INSTAGRAM
Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka uyazi ukuba amabali e-Instagram anokufaka izandi ezikungqongileyo. Umzekelo, ukuba ubamba ividiyo yesikhwenene esithethayo, ngekhe ufune ukutsiba isandi, akunjalo?
Kodwa emva koko, ayizizo zonke iimeko ezinomtsalane njengangaphambili. Uninzi lwexesha, kukho i-cacophony yengxolo okanye akukho nto konke konke. Nokuba yeyiphi indlela, ibali le-Instagram liziva lingenanto.
Ukuba uhlala ufumana kwimeko enjalo, sinesisombululo kwaye sinobuhle.
Isicelo se-Instagram, ngokwaso, siyakwazi ukukhupha izandi kwi-smartphone. Ke ukuba unayo ingoma ebalekayo kuso nasiphi na isidlali somculo esifana neSpotify, uGoogle Music, okanye iPowerAmp, usetyenziso lunokuyikhupha kwangoko ingoma. Nantsi indlela yokongeza umculo ongasemva kumabali akho e-Instagram.
Ke, kwixesha elizayo xa ufuna ukuba nengoma njengomculo ongasemva webali lakho le-Instagram, cofa nje ingoma kwi-smartphone yakho, vula i-Instagram kwaye uqalise ukubamba ibali.
Kuba iyakubamba izandi kwimakrofoni yefowuni, iya kubamba nesandi esijikelezileyo. Ke ngoko gcina engqondweni ukuba ube nengxolo encinci kangangoko kunokwenzeka.
# 2 UNGAVUZA NJANI UMCULO OBALASELEYO KUMAZIKO AKHO E-INSTAGRAM NGOKUFAKWA KWESICWANGCISO SESITHILI
Ke, apha ngasentla kuya kufikelela kumabali akhawulezileyo. Kodwa ayingawo onke amabali akhawulezileyo. Uninzi lwexesha esele sineefoto kunye nevidiyo kwaye ekuphela kwento engekhoyo yimvelaphi yomculo.
Isicelo esiza kuncedo yi-InShot Video Editor.
Vula ividiyo ngokusebenzisa le app kwaye uyiqhawule njengoko kufuneka. Nje ukuba ugqibile, cofa kwi icon umculo kwibar yesixhobo kwaye ukhethe iingoma zakho.
Uninzi lweengoma lubonakalisiwe, nangona ungazifumana nakugcino lwangaphakathi.
Wakuba umculo ukhethiwe, khetha amanqanaba evolumu omculo afanelekileyo uze uthulise ivolumu yentsusa yevidiyo. Ukuba uyafuna, ungakhetha ukuwela umculo kwakhona.
Qaphela ukuba i-InShot app ilinganisa ividiyo kubungakanani obuncinci, ke khumbula ukuyenza ilingane isikrini. Ngapha koko, unokongeza iilebheli kunye nokubhaliweyo kwisicelo se-InShot.
Ngoku konke okufuneka ukwenze kukucofa Gcina kunye nokufaka ividiyo esigciniweyo njenge Ibali le-Instagram . Yabona, imfutshane kwaye ilula kangangoko inako.
YIYIPHI INDLELA OYITHANDA NGAYO?
Ukuba undibuza, ndifumana indlela yesibini engcono kubo. Kuba ayithethi kuphela okanye inciphisa ingxolo yangasemva kwividiyo, unokongeza ii-emojis ezintle kwividiyo. Kodwa ngamanye amaxesha indlela yokuqala ingqina ukuba sisixhobo esikhethiweyo xa ungenakwenza ngaphandle kwezitikha ezibukhoma ze-Instagram.
1 # 1. NGENDLELA INSTAGRAM
2 # 2 UNGAVUZA NJANI UMCULO OBALASELEYO KUMAZIKO AKHO E-INSTAGRAM NGOKUFAKWA KWESICWANGCISO SESITHILI
3 YIYIPHI INDLELA OYITHANDA NGAYO?
Indlela yokukhuphela iifoto zenkqubela kwi-Instagram kwi-PC nakwi-Android